Ije nke Fmaara | Akụkọ Njem
Maria | | United States, Ihe ị ga-ahụ
Nrọ nke onye ọ bụla na-akwado ihe nkiri bụ ịga Los Angeles iji gaa n'akụkụ niile nke City nke Kpakpando, ebe ndị ahụ ha hụrụ ọtụtụ oge na fim na telivishọn na ebe a na-ese ihe nkiri sinima kacha mma.
Otu n'ime ebe nkiri ndị a ịhụ na Los Angeles bụ Walk of Fame, ụzọ ụkwụ ndị kachasị ewu ewu na ụwa. Site na ihe karịrị 2.500 kpakpando raara nye aha ndị kachasị na ụlọ ọrụ ntụrụndụ, kwa afọ ọtụtụ puku mmadụ na-eleta na-achọ aha nke ndị ọkacha mmasị ha kachasị amasị, iji sọpụrụ ndị na-anọghị ebe ahụ na iji nweta foto ncheta na ebe dị egwu dị ka nke a.
Imaara mgbe ejiri Hollywood Walk of Fame? Whonye wee bụrụ kpakpando mbụ na mbara igwe a? Yoù ma ụdị ndị kacha nwee kpakpando na otu ndị kacha nta? Na-esote, m na-ekpughe ihe nzuzo niile nke Walk of Fame.
1 Mmalite nke Walk of Fame
2 Kedu ihe bụ kpakpando mbụ na Walk of Fame?
3 Ibelata Walk of Fame
4 Kedu ụzọ egwu kachasị ama ama nke Walk of Fame?
5 Pricegwọ nke kpakpando
6 Ofdị edemede
7 Kedu udi nke nwere kpakpando?
8 Enwere ndị Spain nwere kpakpando?
9 Na mbụ animated agwa na-enweta ya?
10 Onwere onye na-emegharia kpakpando?
Mmalite nke Walk of Fame
E nwere echiche abụọ gbasara ihe kpatara eji kpebie iji mepụta boulevard a ihe atụ na Hollywood. Nke mbụ bidoro na 1953 mgbe onye isi oche nke Chamberlọ Ahịa Los Angeles n'oge ahụ, EM Stuart, chọrọ ịkwanye ụtụ maka ụwa nke sinima sitere n'ike mmụọ nke ụlọ oriri na ọ Hotelụ Hollywoodụ Hollywood Hotel, nke ụlọ kpakpando ya na aha ya dị iche iche. .
Nke abụọ na-akpọrọ anyị na 1958 mgbe Hollywood goro onye na-ese ihe Oliver Weismuller iji nyere aka rụzie ọrụ nke obodo ahụ ma mee ka ọ mara mma maka ndị njem na Angelenos. A na - ekwu na imepụta Hollywood Walk of Fame sitere n'ike mmụọ nsọ ntakịrị obere ihe nkiri nke nwanyị na-eme ihe nkiri Constance Talmadge nwere mgbe ọ na-ezighi ezi ịbanye na mpaghara ọhụụ ma hapụ akara nke ịchụ nta ya n'ala. Ma ọdịnala bidoro!
Kedu ihe bụ kpakpando mbụ na Walk of Fame?
Thatbụ ka o siri dị, kemgbe afọ ndị 50 etinyegola ihe karịrị kpakpando 2.000 n’ala na n’etiti 90s, a ga-agbasawanye Walk of Fame n’ihi na ọ pere mpe. Mana nke mbụ nke kpakpando niile ka enyere onye omee Joanne Woodward na 1960.
Ibelata Walk of Fame
N'ihi mmebi nke agbata obi n'etiti 1960 na 1968, Walk of Fame dabara na nchefuru na enweghị kpakpando ọhụụ agbakwunyere. Kaosinadị, mgbe e weghachiri ya, e nyere ya ume ọhụụ na ka o wee nwetakwa aha ọma, nraranye kpakpando nke ọ bụla sochiri emume nke onye a na-asọpụrụ ga-anọ.
Foto | Owen Lloyd Wikipedia
Kedu ụzọ egwu kachasị ama ama nke Walk of Fame?
Otutu n’ime ha buru Hollywood Boulevard, obu ezie na enwekwara otutu kpakpando nke etinyere na Vine Street.
Pricegwọ nke kpakpando
Ọ bụ iwu na ndị nyere onyinye ga-elekọta nlekọta nke kpakpando nke Walk of Fame. Onu ogugu di gburugburu $ 30.000 taa. Agbanyeghị na ọnụahịa ahụ nwere ike ịkụda ọtụtụ mmadụ inwe kpakpando nke aka ha, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ boulevard a ma ama n'etiti ndị na-ese ihe, na-anata ihe nhọpụta 200 kwa afọ iji tinye mkpụrụ edemede ọhụrụ na ndepụta sara mbara. Naanị ihe ruru 10% nke ndị ahọpụtara ahọrọ.
N'ihi esemokwu nke dị mgbe ụfọdụ banyere nhọrọ nke ndị na-asọpụrụ, e nwere ugbu a kọmitii kewara ụzọ ise nke na-ahọrọ ndị ga-enwe kpakpando na ala na Los Angeles.
Igwefoto: Onyinye nye ulo oru ihe nkiri.
Telivishọn: Onyinye nye ụwa nke telivishọn.
Gramophone: Onyinye nye ulo oru egwu.
Igwe okwu: Onyinye nye ụwa redio.
Nkpuchi: Onyinye nye ulo ihe nlere.
Kedu udi nke nwere kpakpando?
Ka ọ dị ugbu a, 47% nke kpakpando na Walk of Fame so na ngalaba ihe nkiri na ihe na-erughị 2% enwetala onyinye maka ụlọ ọrụ ihe nkiri.
Enwere ndị Spain nwere kpakpando?
Nke ahụ bụ otú ọ dị. N'ihe nkiri vidio bụ Antonio Banderas, Javier Bardem na Penélope Cruz bụ ndị na-eme ihe nkiri Spanish nwere kpakpando nke ha na Walk of Fame n'agbanyeghị Onye mbụ nwetara otu bụ Julio Iglesias na ngalaba egwu na 1985. Nakwa na ndepụta a bụ tenor Plácido Domingo.
Na mbụ animated agwa na-enweta ya?
N'oge emume nke iri ise ya, Mickey Mouse ghọrọ katoonu izizi iji nweta kpakpando na 1978. Kemgbe ahụ, ihe odide ndị ọzọ iji nweta ya bụ Snow White, Bugs Bunny, The Simpsons, Donald Duck, Shrek, Crazy Bird na Kermit the Frog, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Onwere onye na-emegharia kpakpando?
Dika odi ka odi ka ogagh adi, onye megharia na onye amara bu onye nwere kpakpando ise na Walk of Fame bu onye egwu egwu na onye omeegwu Gene Autry.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » United States » nnukwu ọnụ ụlọ ndị ama ama